နယူးယောက်ရှိလိင်ဆိုင်ရာ 37 စာပိုဒ်တိုများ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
လူကြိုက်များတဲ့ "Sex and the City" စီးရီးကိုသင်သိပါသလား။ ၎င်းသည်အသက် ၂၀ ကျော်ပြီဖြစ်သောအသက်အရွယ်မရသည့်စီးရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည်သူတို့၏ရာသီဥတုများကိုကြည့်သောအခါမည်သည့်အရာကမျှအရေးမကြီးပါ၊ အကြောင်းမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြည့်လျှင်သင်စီးရီးကိုကြည့်ပါကသင့်ကိုချိတ်ဆက်လိမ့်မည်။ ဒါဟာအစီအစဉ်များကိုချိုးဖျက်တဲ့စီးရီးဖြစ်ပါတယ်။ မန်ဟက်တန်တွင်နေထိုင်သောသူငယ်ချင်းလေးယောက်ခန့်သည်တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်သက်ဆိုင်ရာဘဝနှင့်သက်ဆိုင်ပြီးစကားလုံးများမပြောဘဲလိင်ဆက်ဆံမှုအကြောင်းပြောဆိုကြသည်။
ထို့အပြင်သူတို့ကစီးရီးအာရုံစူးစိုက်သောအချိန်တစ်လျှောက်လုံးဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုသတ်မှတ်တဲ့အသွင်အပြင်နှင့်ဗီရိုနှင့်အတူမိတ်ဆွေလေးယောက်ဖြစ်ကြသည်။ သူ၏စကားစုများသည်စီးရီးကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးသင်မမြင်တွေ့ခဲ့ဖူးသူအားလုံးအတွက်မှတ်မိရန်ကျန်ရှိသည်။ ဤဝါကျများကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖတ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်!
သူငယ်ချင်းလေးယောက်၏ဤထင်မြင်ချက်များသည်သင့်စိတ်ထဲစွဲမြဲသွားလိမ့်မည်။ သူတို့သည်သင့်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအမှတ်အသားပြုလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အာမခံနိုင်သည်။ ၄ င်းတွင်ရာသီဥတု ၆ ခုတွင်အခန်း ၉၄ ခုပါ ၀ င်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ပြောပြခဲ့သည့်မိတ်ဆွေလေး ဦး ၏အဖြစ်အပျက်များကိုပြောပြသည်။ စီးရီးကိုအပြီးသတ်ပြီးသော်လည်း၎င်းသည်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုဆက်လက်ပုံဖော်နေပြီး၎င်း၏လူကြိုက်များမှုမှာ ၂၀၀၈ နှင့် ၂၀၁၀ တွင်ရုပ်မြင်သံကြားဗားရှင်းအခြေခံရုပ်ရှင်နှစ်ကားကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ထိုယောက်ျားသည်မီးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ဖူးသော်လည်းထိုမိန်းမသည်၎င်းနှင့်မည်သို့ကစားရမည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ - Carrie Bradshaw
အချို့အမျိုးသမီးများသည်ယဉ်ပါးအောင်လုပ်ခြင်းမခံရပါ။ သူမနှင့်အတူပြေးရသောသူကဲ့သို့ရူးနေသူတစ် ဦး ကိုမတွေ့မချင်းသူတို့လွတ်မြောက်ရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည် ။- Carrie Bradshaw
ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကမင်းမိသားစုပဲ။ သင်နှင့်အခြားသူများကိုသင်မချစ်သောအချိန်ကာလများရှိသော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်သူတို့သည်သင်အမြဲအိမ်ပြန်လာကြသူများဖြစ်သည်။ တခါတရံတွင်သင်မွေးဖွားလာသည့်မိသားစုဖြစ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံသင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သောမိသားစုဖြစ်သည်။ Carrie Bradshaw
အမျိုးသားများကမရှုပ်ထွေးပါ။ သူတို့ဟာ plant.- Samantha Jones နဲ့တူတယ်
ဟောင်းတ ဦး နှင့်အတူလိင်စိတ်ဓာတ်ကျနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ကောင်းတယ်ဆိုရင်အဲဒါမရှိတော့ဘူး။ မကောင်းရင်မင်းကသာမာန်လူတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်
သင်၏နှလုံးကိုမည်သူဖောက်ဖျက်သည်ဖြစ်စေ၊ ကုသရန်မည်မျှကြာသည်ဖြစ်စေသင်၏သူငယ်ချင်းများမပါဘဲသင်ဘယ်သောအခါမျှကျော်လွှားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ ။- Carrie Bradshaw
ငါ့စကားကိုနားထောင်, စံပြလူသည်ထင်ယောင်ထင်မှားပါပဲ။ သင်၏ဘဝကိုစတင်နေထိုင်ပါ
နယူးယောက်အားလုံးသည်လိင်အကြောင်းဖြစ်သည်။ လူများက၎င်းကိုရရှိကြသည်၊ ၎င်းကိုရယူရန်ကြိုးစားသူများ၊ ၎င်းကိုမရရှိနိုင်သူများ။ မြို့ကဘယ်တော့မှမအိပ်ဘူးဆိုတာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊ သူမလိင်ဆက်ဆံရန်ကြိုးစားခြင်းမှာအလုပ်များလွန်းနေသည် ။- Carrie Bradshaw
အပျိုဖော်ဝင်သည်အဆင့်ဖြစ်သည်။ ၁၅ နှစ်ကြာငြင်းပယ်ခံရခြင်းသည်လူနေမှုဘ ၀ ဖြစ်သည်။ Stanford Blatch
ခံတွင်းလိင်သည်ဘုရားသခင်အားမိန်းမများပေးသောဆုလက်ဆောင်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ဝန်ရလိမ့်မည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲ၎င်းသည်မကျေနပ်နိုင်ပါ။ Miranda Hobbes
နယူးယောက်၌ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအကြာချိန်းတွေ့ရန်ရှင်သန်နိုင်ရန်အတွက် Samantha သည်အစွမ်းထက်သည့် hybrid ဖြစ်လာသည်။ အမျိုးသားတစ် ဦး ၏အတ္တသည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ကိုယ်ခန္ဓာတွင်ပိတ်မိနေသည် ။- Carrie Bradshaw
ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကမိသားစုပဲ။ သူတို့ကိုသင်နှင့်အခြားသူများကိုသင်မချစ်သောနေ့ရက်များရှိသည်၊ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်သူတို့သည်သင်အမြဲသွားသောလူများဖြစ်သည်။ - Carrie Bradshaw
ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်၏။ -Samantha Jones
ဟယ်နဲ၊ မင်းစိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့ fuck ဆိုတဲ့အသံတိုင်းမကြားနိုင်ဘူး။ မင်းရူးသွားမှာပါ -Samantha Jones
ငါ့စကားကိုနားထောင်၊ စုံလင်သောလူသားသည်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်သည်။ သင်၏ဘဝကိုစတင်နေထိုင်ပါ။ -Samantha Jones
ငါယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုစောင့်နေတဲ့တစ်နေ့လုံးအိမ်မှာထိုင်နေတဲ့မိန်းမလိုငါမဟုတ်ဘူး။ -Samantha Jones
ကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်မှုကိုခံစားလို။ တောင်းပန်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ -Miranda Hobbes
အော်ဂဇင်သည်စိတ်ကူးယဉ်ကဒ်ပြားများကိုမပို့ပါ၊ Charlotte york
ဒီတစ်ခါလည်းကျွန်တော်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားနှင့်အတူဝိညာဉျကိုအိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ယောက်ျားတွေဟာပျော်စရာကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေပဲ။ Charlotte york
လူတစ်ယောက်အကြောင်းသူတို့သူငယ်ချင်းများအားဖြင့်သင်သိနိုင်သည်။ -Miranda Hobbes
ငါ့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ ၀ င်ငွေကိုကြည့်ပြီး Sexy ဆိုတာငါကြည့်ဖို့ကြိုးစားတာပဲ။ -Miranda Hobbes
ဆက်ဆံရေးဟာဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဟာရင့်ကျက်ပြီးရိုးသားတဲ့ဆက်သွယ်ရေးအတွက်ဖြစ်တယ်။ -Miranda Hobbes
ကလေးကိုသင်လွှတ်လိုက်ရအောင် နယူးယောက်ရှိခွေးတိုင်းကကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုသောအရာများကိုကျွန်ုပ်ဂရုစိုက်ပါကကျွန်ုပ်၏အိမ်မှဘယ်တော့မှထွက်မည်မဟုတ်။ -Samantha Jones
ငါချိုမြိန်ချိုချိုနဲ့ရိုးရာဖြစ်၏ ဒါ့အပြင်အနည်းငယ်မျှသာ prim နှင့်နုံ, ငါပြီးပြည့်စုံသောဘဝ၏ရုပ်ပုံထက်လျော့နည်းဘို့အနည်ထိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
လိင်သည်တစ်စုံတစ်ရာကိုချစ်သောသူနှစ် ဦး အကြားဖြစ်ပျက်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ -Charlotte York မြို့
သင့်ကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့စုံလင်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။ -Charlotte York မြို့
ခင်မင်ရင်းနှီးမှုသည်ဆက်ဆံရေး၏အစဖြစ်သည်။ သူတို့ကငါနဲ့ဆက်ဆံရေးမလိုချင်ဘူးဆိုရင်သူတို့နဲ့ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းမဟုတ်ဘူး။ Charlotte York
လူတစ် ဦး နှင့်ချိန်းတွေ့သည်ဆိုလျှင်၎င်းတို့အကြောင်းကိုမေ့ရန်နှစ်ကြိမ်သာလိုတော့သည်။ - Charlotte York မြို့
ယောက်ျားသည်မီးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ဖူးသော်လည်းထိုမိန်းမနှင့်မည်သို့ကစားရမည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ -Carrie Bradshaw
အမျိုးသမီးများအတွက်အိတ်များကအမျိုးသားများအတွက်ဥများကအမျိုးသမီးများအတွက်ဖြစ်သည်။ အများပြည်သူ၌အဝတ်အချည်းစည်းရှိသည်ဟုမခံစားရပါ။ -Carrie Bradshaw
Soulmate - စကားလုံးနှစ်လုံးနဲ့ကြီးမားတဲ့အယူအဆတစ်ခု၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကတစ်နေရာရာကမင်းရဲ့နှလုံးကိုသော့ခတ်ထားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်။ - Carrie Bradshaw
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုနိမ့်သော်လည်း Oreo. -Carrie Bradshaw ကိုစားခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုကျန်းမာသန်စွမ်းစွာဖြင့်ဖော်ပြသည်
အလွန်အမင်းချောမောသောယောက်ျားများသည်ဘယ်သောအခါမျှမဖြစ်ရသောကြောင့်အိပ်ရာထဲတွင်မကောင်းပါ။ -Carrie Bradshaw
ယောက်ျားအချို့လုပ်ရပ်ကိုပြုလုပ်သောအခါ၎င်းသည်အချစ်ဟုသတ်မှတ်သည်။ အမျိုးသမီးများပြုလုပ်သောအခါ၎င်းသည်အပူတပြင်း (သို့) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်သည်။ -Carrie Bradshaw
အားလုံး၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံး၊ အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောနှင့်စိန်ခေါ်မှုရှိသောဆက်ဆံရေးသည်သင်နှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးဖြစ်သည်။ ပြီးတော့မင်းကိုချစ်တဲ့သူကိုမင်းကိုချစ်တဲ့သူကိုတွေ့ရင်မင်းဟာအရမ်းကောင်းတယ်။ -Carrie Bradshaw
တစ်ကိုယ်ရေဘဝမလုပ်မီကသင့်ကိုဘယ်သူမှမချစ်ဘူးဆိုတာဆိုလိုတယ်၊ အခုသင်ဟာလှပပြီး sexy ဖြစ်နေတယ်၊ ​​မင်းကမင်းရဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုနေထိုင်စေချင်တယ်၊ ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူ့ကိုဝေမျှချင်တယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အချိန်ကိုဖြုန်းတီးနေပြီလို့ဆိုလိုတယ်။ -Carrie Bradshaw
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » နယူးယောက်ရှိလိင်၏ 37 စာပိုဒ်တိုများ